2019 rave riri gore rinoshamisa re AMD pamativi ese. Kupatsanurana kwavo kweCPU, kwaita, kwave kubhururuka tafura kuruboshwe nekurudyi mhiri kwemutengi, sevha, uye nzvimbo yekushandira CPU. Zvichakadaro chikamu cheGPU chakapedza gore ravo vachiputira nekutumira maNavi GPU avo, iwo mativi ekutanga vachishandisa yavo nyowani yeRNANA. Iye zvino, sevamwe vese ve2019 vanokurumidza kumhanya, AMD's GPU chikamu ichapinda mushoko rimwe rekupedzisira pamwe nekuburitswa kwemahara avo makuru, 1080p-yakatarisa Radeon RX 5500 XT makadhi.
Kuburitswa kwe5500 XT yanga iri mhando yenzira isinganzwisisike ye AMD. Iyo kambani yakatanga kuzivisa iyo yakazara Radeon RX 5500 nhepfenyuro kumashure pakutanga kwaGumiguru. Icho chiziviso chakange chiri OEM-centric, paine AMD ichizivisa zvikamu izvo vavowo vavanoshandira muOEM vaizotumira mumatafura nemaraptops yenguva yezororo. Makadhi eRetail aive chikamu chechirongwa che AMD zvakare, hongu, asi izvo zvakagashirwa zuva rekutangisa “Q4 2019” zuva rekutanga. Asi ikozvino nemavhiki asingasviki maviri ekuenda kusvika Kisimusi, iyo RX 5500 makadhi ari pano pakupedzisira - uye kwete chinguva zvakare munguva pfupi.
Kutangwa nhasi kune AMD's Radeon RX 5500 XT makadhi. Aya makadhi anoitirwa sub- $ 200 musika we 1080p mutambo wemitambo, zvinobudirira (uye pakupedzisira) kutsiva AMD yakagara Radeon RX 580 uye RX 570 makadhi, uye kuenda kumusoro-kune-musoro neNVIDIA GeForce GTX 1650 uye GTX 1660 mhuri. Sezvazvakajairwa ne AMD mune ino mutengo, kambani iri kutanga kurongedza maviri akasiyana eRX 5500 XT: tiri kutora maviri ese 8GB makadhi, pamwe 4GB makadhi senzira yebhajeti. Makadhi ose ari maviri akavhomorwa zvakafanana, asi sezvo isu tiri kupinda mu2020, iwo mamakiridwe e4GB yeVRAM pamusoro pe 8GB akakwana zvekuti inogadzira misiyano chaiyo pakati pemakadhi. 8GB RX 5500 XT ichave ichitora-yakakoshesa $ 199 slot, nepo 4GB RX 5500 XT ichirova masherufu kutanga ku $ 169.
Kutsigira makadhi matsva ndiko AMD's nyowani Navi 14 GPU. Sezvazvaive zvakaita nemashure-ekupedzisira maGPU muzvizvarwa zvakapfuura, AMD yakatora nzvimbo dzekuvaka dzeNavi kuvaka uye vakaunganidza diki, risingadhuri, uye isina simba-nzara nzara GPU inonyatsokodzera musika- $ 200 musika. Mukuita uku Navi 14 inoregedza mamwe maCU, mamwe maROP, uye imwe yekurangarira bandwidth ichienzaniswa neiyo yekutanga Navi 10, asi inochengeta zvese zvezvinhu zvakavakirwa RDNA (1) kuvaka, kusanganisira kugadzirisa kwakanaka AMD kwaakaita ipapo. Uye, nenyaya iyoyo, inowana yakazara-mafuta media yekugadziridza block zvakare.
Nezve saizi yekufa uye ma transistor akaverengerwa, AMD yakadonha inenge 3.9B transistors kubva kuNavi 10, inouya ku38% mashoma transistors zvachose. Izvi zvinoshandura kuva saizi yekufa ye158mm2, yakafanana zvakakwana 37% idiki pane Navi 10. Kuenzaniswa nezera re AMD rakapfuura rezvikamu, kuenzanisa kune dombo zvishoma sezvo tarisiro yekuita uye hukuru hwekufa yakakwira zvakazara, asi izvi zvinoshanda kune kuverenga kweye transistor nezve 12% yakakwira kupfuura Polaris 10 / 20 / 30, mune 70% chete nzvimbo. Polaris 11 (yakashandiswa muRX 460 / 560) ingave yekufananidza kwakanyanya pano, mune iyo AMD yakawedzera yavo transistor kuverenga ne 113% apo ichingowedzera saizi yekufa ne28%.
Uku kuvandudzwa uku kunouya nekutenda kune TMSC's 7nm maitiro, hongu. Mwoyo we AMD's inotevera-chizvarwa chigadzirwa stack pane CPUs uye GPUs ye2019, AMD iri zvakare kushandisa iyi maitiro kune yavo yazvino Navi GPU. Izvi zvinoramba zviri mutsetse wakakomba we AMD pamakwikwi, sezvo NVIDIA ichiri kushandisa TSMC 12nm - iri 16nm-derrered maitiro - kune maGPU avo. Izvi zvinopa AMD kukwanisa kuisa pasi madiki transistors anoshanda pamazasi emagetsi mashoma, neyekutengesa-ibvepo yekuti 7nm idiki, inonyanya kudhura maitiro. Uye, kana mishumo ichizodavirwa, imwe iyo vatengi veTSMC vari kufamba-famba kuchengetedza yakavanzika inotanga nekuda kwekuda kwazvo.
Game Clock 1717MHz 1625MHz N / A N / A
Kuwedzera Clock 1845MHz 1725MHz 1244MHz 1275MHz
Kupinza (FP32) 5.2 TFLOPs 7.95 TFLOPs 5.1 TFLOPs 2.6 TFLOPs
VRAM 4GB / 8GB 8GB 4GB 4GB
Yakaitwa Bhodhi Power 130W 180W 150W 80W
akitekicha RDNA (1) RDNA (1) GCN 4 GCN 4
Kutanga Musi 12 / 12 / 2019 07 / 07 / 2019 04 / 18 / 2017 05 / 2017
Kutanga Mutengo $ 199 / $ 169 $349 $169 $99
Zvinoshamisa uye atypically kune yepamusoro-tier XT-mhando chikamu, AMD iri kwete uchishandisa Navi 14 GPU inosevenza pano. Nepo AMD isina kumbobvira yasimbisa zvepamutemo nhoroondo dzeNavi 14, isu tinoziva kubva kune zvimwe zvigadzirwa zveNavi 14 - kunyanya, zvikamu zveRadeon Pro 5500M zvinopinda mumalaptops eApple - kuti Navi 14 inouya ne24 CU. Saka chikamu che22 CU nekusiyanisa ndechimwe chinhu chisingatarisirwi kutumirwa, kunyange zvakadaro pakupedzisira hachinei nekuita kwakawandisa. AMD haina kutaura zvakananga kuti nei vasiri kushandisa ese 24 CUs, asi vakapiwa kuti mutengo unoerera sei uyu musika uye nemukurumbira nzira yeTSMC's 7nm yave iri, ini handingashamisi kana AMD irivavarira kuwana akawanda anobatsira anofa sezvavanenge vanogona kubva yavo Navi 14 wafers.
Chero zvazvingaite, iyo RX 5500 XT inobatana nemhuri ye AMD pasi peRX 5700, ine 14 shoma CUs (-39%) pane yakanakira AMD kadhi. Nekudaro, apo CU ichiverengerwa pasi, iyo nguva yekushanya ichave yakakwira zvishoma, neiyo RX 5500 XT yakatakura mutambo wachi ye1717MHz, 92MHz (6%) yakakwira kupfuura iyo RX 5700. Saizvozvo, iyo yekuwedzera wachi yekuwurisa yakakwira zvakare, kune 1845MHz.
Panyaya yezvese GPU inoita ipapo, panguva yakazara wachi RSS 5500 XT ine peak compute / shader throughput ye5.2 TFLOPs. Iyi ndiyo 35% pazasi penji yeiyo RX 5700, uye yakafanana pamhando yekusvetuka kwatinoona pakati pemakadhi mateki.
Zvichakadaro padivi rekuyeuka kwezvinhu, iyo RX 5500 XT inowana yakaderera memory memory bus futi. Kuuya kubva muRX 5700 inotevedzana uye yayo 256-bit bhazi, AMD makuru makuru makadhi panzvimbo anouya ne128-bit memory memory bus. Nekudaro, iko iko chete shanduko yekuyeuka; AMD ichave ichishandisa GDDR6 yemakadhi aya zvakare. Saka nepo kudonha kwakabudirira kweyeuko bandwidth kuhama kune iyo RX 5700 kwakakosha - kuenda kubva ku448GB / sec kuenda ku224GB / sec - ichave kekutanga nguva iyo GDDR6 ichiratidza kumusoro mune $- $ 200 AMD kadhi. Nekuda kweizvozvo, iyo RX 5500 XT ichiri kuwana mukana wekuyeuka kwakawanda bandwidth, uye mune izvi inofanirwa kurasa pamusoro pehuremu hwayo zvichienzaniswa nekare 128-bit mabhidhi emabhangi. Kana iri yehuwandu yekuyeuka kuwanda, sezvakambotaurwa AMD nevarume vayo vari kutumira ese 8GB uye 4GB makadhi sekuita uye kukosha sarudzo dzakateerana.
Pakupedzisira, AMD yakaisa iyo yakazara bhodhi simba (TBP) yemakadhi aya pa130W. Izvi zvakanyanya kuderera kupfuura avo OEM vanogarisana navo, avo vanotumira neiyo yakafanana maitiro maitiro, asi 150W TBP. Iwo makadhi eEMEM akabvuma kuti isu tashungurudzika ipapo - 150W yakanga isinganyatsogadzikike, uye yakaderera chete kupfuura iyo 180W TBP yeRX 5700 - saka zvakanaka kuti uone kuti AMD iri kuwedzera hutsinye mukupedza simba remagetsi kutengesa kwavo kutengesa. makadhi, nekudaro vanowedzera simba ravo kushanda. Zvichakadaro, papepa iyo RX 5500 XT yakaiswa kuburitsa 65% yeyakaita RX 5700 ye 72% yeiyo bhajeti remagetsi, saka isu tichafanirwa kuona kuti masimba ekupedzisira anotaridzika sei. Uye, nekuda kwechinhu ichocho, kana 130W yakakwana iyo 5500 XT kuraramisa nguva dzayo dzekuwongorora, kana kana makadhi achizoda kudzoka zvishoma kuti asangane nemasimba avo.
Chigadzirwa Positioning & Iyo Makwikwi
Mukati meiyo chigadzirwa chechigadzirwa che AMD, iyo mitsva Radeon RX 5500 XT makadhi anosarudzwa ane chinangwa mumusika we1080p. Nepo 5700 makadhi ekuteedzera ainyanyoitirwa 1440p - uye akaunzwa mushe mukuremekedzwa - iyo RX 5500 XT haina rudzi rwekuita kuti urambe uripo. Panzvimbo iyoyo, iyo RX 5500 XT inofanira kukwanisa kutamba ku1080p nevashoma (kana paine) kukanganisa, kunyanya pane yakanyanya kuyaka 8GB kadhi.
Zvichakadaro, kunyange AMD iine marekodhi RX 5500 makadhi ekutevedzana, izvo zvave kutumira kune OEMs kwemwedzi yakati wandei, hatisi kuzoona aya makadhi mune yekutengesa. Panzvimbo pezvo, kuburitswa kwanhasi, kwakawanda kusimudzira kwakaoma, kunoitwa chete nevatambi vebhodhi, avo vari kuburitsa maitiro avo azere tsika nhasi. Sezvo aya ari madiki- $ 200 makadhi isu hatingazoone chero chinhu chinoshamisa - kazhinji misiyano pane mbiri uye nhatu fan faniki - kunyangwe fekitori yakawedzera makadhi anozopunzirwa mumusanganiswa.
Uye kunyange ichi chiitiko chakaoma kuburitswa, ndinofungidzira kuti tichaona mabheti ekutanga emakadhi eRX 5500 XT arambe ari muhomwe kwenguva yakareba. Ukatarisa nhamba dzekutengesa uye maaccount emakadhi aripo pamberi pekutangwa kwanhasi, vatengesi vanga vaine dambudziko rekuchengeta chero chinhu muhomwe - makadhi evhidhiyo kana zvimwe zvikamu zvekombiyuta - saka RX 5500 XT haigone kunge yakanyanya kusiyana. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchida kunge uchitsausa vanhu neKisimusi mangwanani, kungave kuri kwekuchenjera kutora kadhi nekukurumidza kupfuura gare gare - asi chete kana wapedza kuverenga kuongororwa uku.
Mukati meiyo chigadzirwa che AMD ipapo, kuburitswa kweRX 5500 XT kunoreva kuti AMD iri pakupedzisira kutanga kuita mhepo yekudzikisa kugadzirwa nekutengesa kweRadeon RX 590 / 580 / 570. Nemakadhi matsva e-Navi-based makadhi anopfuura AMD emakadhi mazhinji ePolaris nguva yose ichidhiza simba shoma, chinhu choga kuchengetedza RX 5500 XT kubva nekutsiva RX 500 yekutevedzana ichave iri kunyatsoita AMD uye yayo ebhodhi vavabati vanogona kuchengeta musika wazara. Panguva ino, tarisira kuona vatengesi vachimhanyisa kutengesa kweiyo RX 500 nhepfenyuro kuti vatore yavo yakasara yotengeswa.
Zvichakadaro, tisati taenda kure, vamwe tarisiro yekutarisira iri pano pano. Ipo iyo RX 5500 XT ichitsiva iyo RX 500 yakatevedzana mukati me AMD iri ipapo chigadzirwa stack, RX 5500 XT naNavi 14 kwete zvairehwa kuve kukwidziridzwa kweiyo RX 500 mfululizo. Iri ibasa reRX 5700 akateedzana. Pane kudaro, iyo RX 5500 XT iri pedyo nekusimudzira iyo Radeon RX 560; Navi 14 iri uye yakakura mutsivi 7nm anotevera Polaris 11. AMD yave kutengesa iyo RX 580 uye RX 570 makadhi anodhura kwazvo pamusoro pemwedzi yekupedzisira ye18, uye izvi zvikaita kuti zviitike, akabvuma zvisizvo kutengesa zvishoma. Pari zvino, zvakati wandei, AMD haisi kutarisa kuendesa kwakanyanya basa ku $ 160- $ 200 kupfuura zvavaimboita kare. Pane kudaro, zviri nezve kuendesa nyowani, hunyanzvi hunyanzvi matekinoroji.
Kana ari mukwikwidzi, makadhi matsva eRadeon achave achienda-kumusoro-kune-NVIDIA's GeForce GTX 1660 uye GTX 1650 Super makadhi. Zvese zvakavakirwa zvakafanana TU116 GPU, NVIDIA ichangobva kuzorodza mutsara nekumisikidzwa kwavo Super musiyano, uyo wainyatsonzwa sekunge pre-emptive mhinduro kune RX 5500 mfululizo. Nekuda kwenzira iyo makambani maviri aya ari akatetepa uye achinyatso kutonga mitengo yavo uye zvigadzirwa, hapana zvachose 1: 1 mutambo pakati peRadeon neGeForce zvikamu ikozvino. 4GB RX 5500 XT iri $ 10 inodhura kupfuura iyo GeForce GTX 1650 Super, uye iyo 8GB RX 5500 XT iri $ 10 Cheap pane iyo GeForce GTX 1660. Izvi zvinoitikawo kuti zvinyatsoita kuratidza kwavo kuita kwehukama: iyo 5500 XT inogona kufananidza Wits ne1650 Super, asi inowira pasi pe1660.
Kune chikamu che AMD, ipapo, iyo kambani iri kuwedzera kutapira iyo chibvumirano nemutambo wakasungwa. Pamwe chete ne 3 mwedzi wemahara muyedzo kuMicrosoft's Xbox Games Pass chirongwa changa chichiuya pamwe nechero chimwe chidimbu che AMD hardware kwehafu yekupedzisira yegore, kambani iri zvakare kuunganidza iri kuuya “Master Edition” ye Monster Hunter: Iceborne. Iyi ndiyo Iceborne kuwedzera kwakasungirirwa pamwe nemucheto mutambo, uye wakaiswa kuburitswa mu2020. Pari zvino NVIDIA haisi kumhanya chero mhando yemasumbu emakadhi avo eGTX, saka iyi inzvimbo iyo AMD ine mumucheto.
Kunyangwe iine yakawanda ye Newegg yemavhidhiyo kadhi stock iri chero chinhu kunze kwekutengesa, iyo pfungwa inogona kunge iri zvishoma moot ikozvino. Nechepasi pemavhiki maviri kuenda kusvika Kirisimasi, kusvika pamberi pese yakanaka sub- $ 200 makadhi anogona kunge ari zano rekunyepedzera, kunyanya neGeForce GTX 1650 Super mutsara wakazara watengeswa kunze.
Holiday 2019 GPU Pricing Kuenzanisa
AMD mutengo NVIDIA
AMD Inosheedzera Radeon RX 5600 Series: A Rakareruka Navi Kuti Atonge 1080p Mutambo
GIGABYTE RX 5500 XT Yekuongorora Mutambo: 7nm Navi paBhajeti